Maitiro ekunyorera nhetembo: mazano ekutanga uye madiki ekuti uwane | Zvazvino Zvinyorwa
Encarni Arcoya | 09/09/2021 17:00 | Nhetembo
Kunyora nhetembo hakusi nyore. Kune avo vane zvirinyore, uye avo vanozviwana zvakati omei kuzviita zvakakwana. Asi kana iwe uchida kudzidza kunyora sei nhetembo, kune mamwe matipi isu atinogona kukupa izvo zvichakubatsira iwe kuona kuti iro harisi dambudziko.
Iwe unoda kuziva kuti ndedzipi kiyi dzekunyora nhetembo? Nzira yekunyora nhetembo yerudo, kufungidzira kana kufungidzira? Ipapo usazeze, pazasi tinokuratidza zvese zvaunoda kuti uzive.
1 Nyora nhetembo, chii chaunofanira kuziva usati waita?
1.1 Zvimwe zvinhu zvekufunga nezvazvo
2 Matipi ekunyora nhetembo
2.1 Ziva zvauchanyora nhetembo nezvazvo
2.2 Kugona mutauro unerwiyo
2.3 Jekesa nezve meseji uye chinangwa chauri kutsvaga
2.4 Shandisa madimikira kana uchiada
2.5 Chengetedza zvese zvinoitwa munhetembo
2.6 Ngwarira zviratidzo zvekupinza
2.7 Paunenge wapedza, dzokorora nhetembo
2.8 Dzidza nhetembo
Nyora nhetembo, chii chaunofanira kuziva usati waita?
Usati watanga kunyora nhetembo, pane mamwe mazano akakosha ausingakwanise kufuratira, nekuti mushure mezvose ndiwo musimboti wenhetembo. Imwe yemafungiro aya ine chekuita nezve nhetembo. Unoziva here kuti yakagadzirwa nei?
ari nhetembo dzakaumbwa nezvinhu zvitatu zvakakosha:
Ndima, unova mutsetse wega wega une nhetembo.
Iyo stanza, inova iri seti yemavhesi aigona kuverengerwa kamwechete uye kutaridzika senge ndima.
Rwiyo, zvinova ndizvo zvinowirirana nendima idzi. Zvino, mukati merwiyo unogona kuwana izwi, apo mavhawero anowirirana chete; izwi rinowirirana, apo mavhawero nemakonzonendi anowirirana; uye yemahara vhesi, kana iwe usinga rwiyo chero ndima (iyi ndiyo yazvino runyorwa). Muenzaniso unogona kunge uri "Kunyangwe tsoko inopfeka sirika / inogara zvakanaka". Sezvauri kuona, kupera kwendima kunowirirana mune yega yega, uye iyoyo inonzi rwiyo rwemakonzonendi. Kune rimwe divi, kana tikati «Pakasvika pakati pehusiku / uye Mwana akachema misodzi, / mhuka zana dzakamuka / uye danga rakava mupenyu ... / uye vakaswedera / ndokutambanudzira kuMwana / mitsipa yavo zana , shuwa / kunge sango rinozunzwa. Kana iwe ukacherekedza, iyi nhetembo yaGabriela Mistral (Romance of the stable of Bethlehem) inotipa assonance Mwana, mupenyu uye akazununguswa; pavakangomuka vachiswedera padhuze. Dzinopera nemavhawero, asi kwete nemakonzonendi.
Zvimwe zvinhu zvekufunga nezvazvo
Imwe yemafungiro ekutanga ekunyora nhetembo ndeye metric. Uku ndiko kuwanda kwemashirobhu mundima uye kwakakosha nekuti vhesi yega yega inofanirwa kuve nemanyorero akati wandei ane chekuita neshoko rekupedzisira. Kana iro izwi riri:
Acute: imwezve syllable.
Llana: gara paunazvo.
Esdrújula: syllable rimwe rinobviswa.
Ehezve, ipapo ivo vanogona kupihwa marezinesi enhetembo senge iyo synalepha, iyo syneresis, iyo hiatus, nezvimwe. izvo zvaizochinja mita yemavhesi kana nhetembo yese.
Chekupedzisira, iwe zvakare unofanirwa kutora chimiro kurangarira. Ndokunge, kuti mavhesi akasiyana achaenda sei kuimba uye achivakwa. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti kune akati wandei mhando, uye yega yega inogona kunzwa kugadzikana neimwe kana imwe.
Matipi ekunyora nhetembo
Paunenge watarisana neiyo isina chinhu peji, iwe unofanirwa kuve wakajeka nezve maitiro ekunyorera nhetembo, uye izvo zvinopinda kuburikidza zvinotevera:
Ziva zvauchanyora nhetembo nezvazvo
Kunyora nhetembo yerudo hakuna kufanana nhetembo yekuvenga. Uye hazvina kufanana kunyora nhetembo chaiyo pane nhetembo yekufungidzira, kana imwe ine dingindira. Usati wazvimisikidza iwe, iwe unofanirwa kuziva zvaunoda kunyora nezvazvo, nekuti kuisa mimwe mitsara inoteedzera pasina kumwezve zvinoitwa nechero ani, asi rwiyo uye kutaurira chimwe chinhu zvakatooma.
Kugona mutauro unerwiyo
Nhetembo haisi nganonyorwa umo maunokwanisa kuwedzera zvaunoda, kana iri nyaya ipfupi kwaunotaura nyaya ine mashoma mazwi. Mune nhetembo iwe unofanirwa kugadzira mazwi iwo pachawo akanaka, kwete chete nekuda kwemazwi, asi zvakare nekuda kwerwiyo, kurira ...
Jekesa nezve meseji uye chinangwa chauri kutsvaga
Izvo zvakakosha kuti, pamusoro pekuziva zvekunyora nezvazvo, iwe zvakare chengeta mundangariro chii chaunoda kuratidza, chii chiri chinangwa chekunyora iyo nhetembo, kana izvo zvaunoda kuti muverengi anzwe kana akuverengera.
Shandisa madimikira kana uchiada
Madimikira ndeaya hunhu hwe nhetembo, uye vanoshandira kushongedza mutauro. Zvino, enda kune izvo zvinozivikanwa uye izvo munhu wese anogadzira nekugadzira yako. Zvakanaka kuzvisimbisa pavari, asi "maparera edova" kana "kudzora zvishuwo" zvakatoshandiswa zvakanyanya, saka hazvisi kuzofadza vateereri vako.
Chengetedza zvese zvinoitwa munhetembo
Tiri kutaura chaizvo nezve nhetembo, mita, huwandu hwendima, mamiriro ... Usati wadzika pasi, sarudza kuti unoda kuti nhetembo iyi ive sei kuti unamatire pairi. Nekudaro, iwe unogona kupa kukoshesa kwakanyanya kuchikamu, kana kuudza zvaunoda munhetembo sekunge ine yekutanga, yepakati uye yekupedzisira.
Ngwarira zviratidzo zvekupinza
Izvo zvauri kunyora nhetembo haireve kuti nyora dzematsetse hadzifanirwe kuremekedzwa. Kunyangwe paine panogona kuve nekuchinjika, chokwadi ndechekuti newe unofanirwa kuzvishandisa, kunyanya kupa kumbomira pakati pemavhesi nezvikamu.
Zvikasadaro unogona kuona kuti meseji yako yakareba zvekuti muverengi haatombo rangarira kuti zvakatanga sei, kana kuti anomira achifema uye achicheka chirevo chizere chedetembo.
Paunenge wapedza, dzokorora nhetembo
Iyo iri nyore nzira yeku ona kana nhetembo iyi "iine hupenyu." Chii icho? Zvakanaka, ndezve kuziva kana ruzha, kana riine mutinhimira, madudzirwo, zvinoreva uye kana zvichinyatsoita kuti umutse chimwe chinhu. Kana iwe ukaiverenga ichiita kunge isina hupenyu kana kubata, usaore moyo uye edza zvakare.
Chinhu chakakosha uye chaunofanirwa kuedza kuudza mumitsara mishoma zvese zvaunoda, uye kuti izwi rega rega rinotakura mutoro wekunzwa izvo zvinoita kuti iro rese rive "nhetembo".
Chikamu chekupedzisira chezano chatinokupa icho icho dzidza zvese zvine chekuita nemhando yekunyora yenhetembo. Iyo chete nzira yekuita zvirinani munhetembo dzako uye kuve mudzidzi pachinhu ichi kudzidza nezvazvo. Naizvozvo, hazvina kukwana kungoverenga nhetembo uye kuona kuti vamwe vanyori vekare uye zvino vakaita nhetembo, asi iwe unofanirwa kuziva kuti chii nheyo, nhoroondo uye shanduko yazvakawana kuti uwane nzira yako wega.
Unoshinga manje kunyora nhetembo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Kunyora sei nhetembo